Boliiska Kenya oo Rag ka tirsan Al-Shabaab madaxooda dul dhigay lacago. – Balcad.com Teyteyleey
Wararka ka imaanaya Kenya ayaa sheegaya in Booliiska dalkaasi uu abaalmarin gaaraysa ilaa 2 million oo shilinka kenyatiga ah siin doonaan qof walba oo xog lagu xiro karo ka soo gudbisa dhowr qof oo ka tirsan Maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaas oo ka dagaalama dalalka bariga qaarada Africa.
Ragaan lacagaha madaxooda la dul dhigay waxaa ka mid ah kuwo dowlada Kenya ay ugu shakisay inay tababar siiyaan dhalinyarada Kenyaatiga si ay uga mid noqdaan Al- Shabaab iyo shabakado lagu barto falalka xag-jirnimada.
Ninkaan magaciisa la yiraahdo Mohamed Ebrahim Mohamed ayaa Booliiska dalka Kenya waxay sheegeen inuu yahay nin hubeysan, islamarkaana khatar ku ah nabadgalyada dowlada Kenya, waxaana shacabka Kenya lagu amray in Booliiska ay la soo xiriiraan hadii ay helaan xog ku saabsan ragaasi ka tirsan dagalyahanada Al-Shabaab.
Dhanka kale raga la doon doonayo waxaa ka mid ah laba walaalo ah oo lagu kala magacaabo Salad Tari Gufu iyo Gufu Tari Gufu, iyadoo Ciidamada Booliiska Kenya sheegeen in abaalmarintan ay u bixinayaan inay sare ugu qaadaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab kuwaa oo weeraro ka fuliya gudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
The post Boliiska Kenya oo Rag ka tirsan Al-Shabaab madaxooda dul dhigay lacago. appeared first on Ilwareed Online.
Dagaal dhimasho iyo dhaawacba ka dhashay oo ka dhacay Duleedka Magaalada Garoowe.